ပေါင်မုန့်အကြောင်းကိုငါဘလော့လုပ်နိုင်လား။ | Martech Zone
စနေနေ့, စက်တင်ဘာလ 23, 2006 တနင်္ဂနွေ, စက်တင်ဘာလ 30, 2012 Douglas Karr
လပေါင်းများစွာကြာရင်ငါမုန့်အကြောင်းကို blogging လုပ်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်။ ဒါကပေါင်မုန့်ပဲမဟုတ်ဘူး။ ဒါဟာအံ့သြဖွယ်အကောင်းဆုံးမုန့်ပဲ။ ငါနောက်နေတာမဟုတ်ဘူး စင်ပေါ်မှာမုန့်အမျိုးအစား ၃၀၀ ရှိတယ်တဲ့စူပါမားကတ်မှာဒီပေါင်မုန့်ဟာမထင်ရှားဘူး။
ယင်း Brownberry 12 အစေ့။
အထူးရောစပ်ထားသည့်အချဉ် ၁၂ လုံးကိုအရသာရှိသောပေါင်မုန့်ထဲသို့ဖုတ်ခြင်း၊ - ဝဘ်ဆိုက်မှ
၎င်းသည်ဖော်ပြရန်ပင်နီးကပ်ခြင်းမရှိပါ။ ၎င်းသည်ပျော့ပျောင်းသည်။ သို့သော်အနည်းငယ်မျှသောအတုံးများနှင့်အစေ့အဆန်များပါရှိသည်။ သို့သော်၎င်းသည်အလွန်ပျော့ပျောင်းလွန်း။ မျက်ရည်များ၊ ဒါကိုထောပတ်နည်းနည်းဖြင့်အတူတူစားပါ၊ ဒါဟာအစဉ်အဆက်ဤမျှအနည်းငယ် browns ... အပြင်ဘက် crusty, အတွင်းပိုင်းပျော့နှင့်အရသာ။ တိုင်းကိုက်အသစ်တစ်ခုကိုအရသာရှိပါတယ်။ mmmmm ။
တစ်ခါတလေကိုယ့်ကိုယ်ကိုအသားညှပ်ပေါင်မုန့်၊ ကြက်ဆင်၊ ကလေးဆွပ်၊ ဆလတ်၊ ခရမ်းချဉ်သီးလုပ်တယ်။
သင်သည်ဤမုန့်ကိုဝယ်ရန်ရှာနေသည်ဆိုလျှင်သတိထားပါ။ စင်ပေါ်တွင်အခြား“ ၁၂ မျိုးစေ့” impostors များရှိသည်။ သူတို့ကတောင်သူတို့အတူတူပင်ထုပ်ပိုး ... ဒါပေမယ့်သူတို့စို့! ပုံကိုသတိရပါ၊ နာမည်ကိုမှတ်ထားပါ၊ မုန့်ကိုဝယ်ပါ။ ကျွန်တော့်ကိုယုံကြည်ပါ။
ဒီ post ကြောင့်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ခဲ့ရင် ကျေးဇူးပြု၍ ခွင့်လွှတ်ပါ။ သူတို့ကငါ့ကိုမပေးကြဘူး (ငါမုန့်တချို့လက်ခံပေမဲ့) ။ မကြာမီကျွန်ုပ်၏ပုံမှန်အကြောင်းအရာသို့ပြန်သွားပါလိမ့်မည်။ သို့သော်ယခုအချိန်တွင်ငါသည်ထောပတ်နှင့်အတူ Brownberry 12 Grain ပေါင်မုန့်ပြားတစ်ခွက်ယူလိမ့်မည်။
WordPress ဆက်သွယ်ရန် Form ကို Spam ကာကွယ်ခြင်း
23:2006 pm တွင်စက်တင်ဘာ 4, 26 မှာ
Hmm, သြဇာလွှမ်းမိုးမှုနှင့်အလိုအလျောက် - စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်နည်းပညာဘလော့; ဘာသာရပ် post Brownberry 12 ကောက်ပဲသီးနှံပေါင်မုန့်။ ဟုတ်တယ် Sean နဲ့သဘောတူဖို့လိုတယ်မင်းမင်းစိတ်မပျက်ခဲ့ဘူး
အခြားမှတ်စုတစ်ခုမှာတော့ကျွန်တော်ဒီမုန့်ကိုဘယ်တော့မှမစမ်းဖူးသေးပေမယ့်အကြောင်းပြချက်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကတော့ငါမှာမုန့်စက်တစ်လုံးရှိတယ်၊ ငါသံမဏိ oats, အကြီးနှင့်အမျိုးမျိုးသောပီဇာအပေါ်ယံလွှာကိုအသုံးပြု။ ယုတ်ပျားရည် oatmeal ပေါင်မုန့်လုပ်ပါ။
အိုးဘာဂါ, ငါဖြည့်စွက်ပြောင်းလဲပစ်ရန်မေ့လျော့, ယခုငါကငါတင်ထားပြီးပြီငါ့ကိုပြောပြသည်ကြောင့်ငါဒီမှတ်ချက် post ခွင့်ပြုမထင်,
23:2006 pm တွင်စက်တင်ဘာ 8, 19 မှာ
စက်တင်ဘာ 24, 2006 မှာ 8: 36 AM
ကျွန်တော်ဟာထောပတ်လူမဟုတ်ပါဘူး ယခုဒိန်ခဲပြန့်ပွားမှု (မုန့်ဒိန်ခဲ) နှင့်ယိုငါ့ကိုပါပဲ!
25:2006 pm တွင်စက်တင်ဘာ 3, 24 မှာ
... ဟမ်၊ ဂျာမနီတောင်ပိုင်းကမုန့်ဖုတ်ကောင်ကနေလတ်ဆတ်တဲ့လက်နဲ့ပေါင်မုန့်ကိုစမ်းဖူးသလား။
13:2006 pm တွင်အောက်တိုဘာ 6, 38
အလွန်ကြီးစွာသောအသေးအဖွဲမေးခွန်းပါတကား! ဂျုံမှုန့် ၁၂- ခုရှိအဆန် ၁၂- ဘာတွေလဲ။
19:2006 pm တွင်အောက်တိုဘာ 2, 51
LOL ... ။ ဒီရယ်စရာကိုငါရှာပါ။ ငါ 12 စပါးပေါင်မုန့်များအတွက်လျောက်ပတ်သောစာရွက်ကိုရှာဖွေဖို့ကြိုးစားနေပိုက်ကွန်ပေါ်မှာပါ။ Nebraska မှာဒီဟာကြီးရှာမတွေ့ဘူး လွန်ခဲ့သောအပတ်ကကနေဒါသို့သွားရောက်ခဲ့ပြီး Dempster ၏ပေါင် ၁၂ ပေါင်မုန့်ကိုကြိုးစားစားပြီးနောက်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အလွန်ချစ်ကြသည်။ ဒီတော့ ... အကယ်။ မည်သူမဆိုတစ် ဦး စာရွက်ကိုရှာတွေ့လျှင်ငါ့ကိုအသိပေးပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် နီနာ
19:2006 pm တွင်အောက်တိုဘာ 7, 40
သင့်ရဲ့ပေါင်မုန့်အတွက်စမ်းသပ်သူတစ် ဦး လိုအပ်မယ်ဆိုရင်ငါ့ကိုစာတစ်စောင်ပို့ပေးပါ။ ငါစာရွက်တစ်ခုချင်းစီကိုအလွန်ဂရုတစိုက်သတ်မှတ်မည်။ မိုင်။
မတ်လ 1, 2007 မှာ 1: 24 pm တွင်
Brownberry 12 စပါးပေါင်မုန့် - ယနေ့သင်သည်ပေါင်မုန့်အထုပ်နှင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တိုင်းကိုကြည့်လျှင်အမေရိကန်စိုက်ပျိုးရေးဌာန၏အစားအစာလမ်းညွှန်ပိရမစ်။
အဘယ်အရာကို packets တွေကိုဖော်ပြရန်ပျက်ကွက်သောအရာကိုအချို့သောမုန့်သည်အခြားသူများထက်သင်တို့အဘို့သာ။ ကောင်း၏သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ထိုအကြံပြုချက်ခြောက်ခုမှ ၁၁ ခုမှခေါက်ဆွဲ ၁ ခွက်၊ ၂ ခွက်သို့မဟုတ်ဆန်သို့မဟုတ်ကျိုးနွံသောပေါင်မုန့်တစ်မျိုးသာဖြစ်ကြောင်းသူတို့မရှင်းပြပါ။ Dunkin မှာရှိတဲ့ငွေတစ်ပုဒ်လောက်မှာစားသုံးစရာလေးခုကိုသင်သုံးမလဲ။ ဒိုးနတ်။
16:2007 pm မှာဇွန် 4, 50
“ WordPress နှင့် Brownberry 12 Grain ပေါင်မုန့်ဖြင့်လုပ်သော DouglasKarr.com” 😀
ဒါက rock အမှန်ပဲကျောက်ဆောင်လိမ့်မယ်
Doug, ပေါင်မုန့်အပါအ ၀ င်ဘာမှမရေးနိုင်ဘူး (ငါနေတဲ့နေရာကနေဒီသတ်သတ်မှတ်မှတ်မျိုးကိုဝယ်လို့မရဘူး ။-) ... ငါသည်ဤ post ကိုခံစား ...